‘सप्तगण्डकी जलविद्युत्को योजना अगाडि बढाउँछु’ | चितवन पोष्ट
गृह » ‘सप्तगण्डकी जलविद्युत्को योजना अगाडि बढाउँछु’
सञ्चार उद्यमी सहनलाल प्रधान उवासंघ चितवनको निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । २०६२ सालमा कार्यसमिति सदस्य बनेका प्रधान दुई पटकसम्म तृतीय उपाध्यक्षसमेत भएका थिए । ०६४ सालमा र ०६६ सालमा दुई पटक उनी तृतीय उपाध्यक्ष बनेका थिए । उनी ०६८ सालमा प्रथम उपाध्यक्ष भएका प्रधान ०७० सालमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष भए । यसअघि अध्यक्षमा पराजित भएका उनै सहन प्रधानसँग भएको कुराकानी ः
१) फेरि पनि अध्यक्षमै तपाइँले किन उम्मेदवारी दिनुप¥यो ?
यसअघि म प्राविधिक कारणले अत्यन्तै थोरै मतले पराजित हुनुपरेको हो ।
व्यवसायिक एकता गर्न र समग्र चितवनको विकासका लागि नै मेरो उम्मेदवारी हो । व्यवसायीहरुको माग र व्यापक दबाबका कारण मैले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुपरेको हो । म जति व्यवसायीहरुको घरमा पुगें, उनीहरुले सहन प्रधाननै अध्यक्षमा उठ्नुपर्छ भनेका थिए । त्यसकारण पनि मैले उम्मेदवारी दिएको हो । व्यवसायीको साथ र सहयोगले नै मलाई अध्यक्षमा उठाएको हो । उद्योग वाणिज्य संघको छविलाई उच्च बनाउन, व्यवसायीहरुको विकास गर्न, विभिन्न झमेलाबाट व्यवसायीहरुलाई मुक्त बनाउन मेरो उम्मेदवारी हो । मलाई नेतृत्वमा बसेर काम गरेको हेर्न व्यवसायीहरु आतुर छन्, त्यसकारण मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
२) यसअघि संघमा रहँदा तपाइँले केही गर्न नसक्नुभएको आरोप पनि छ नि ? कसरी हेर्नुभएको छ ?
– यो गलत आरोप हो । मैले संघको नेतृत्वमा बस्न पाएको छैन । सबैभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने नेतृत्वले हो र त्यसको बढी जस नेतृत्वमा नै जान्छ । व्यवसायीहरु मलाई नेतृत्वमा पु¥याउन आतुर छन् । व्यवसायीहरुको मागका कारण नै म उठेको हुँ । मलाई सबै वस्तुगत संघ र कर्पोरेटका साथीहरुको समर्थन छ । मेरो जित सुनिश्चित छ । साथीहरुले अग्रिम बधाई दिइरहेका छन् । मैले मरो कार्यकालमा धेरै गरेको छु । नारायणी नदीमा सोलार हाल्ने काम मेरो अगुवाइमा भएको हो । ६२ सालमा संघको अवस्था कस्तो थियो, अहिले कस्तो भएको छ । सबैलाई जगजाहेर छ सहन प्रधानले संघमा खेलेको भूमिकाबारे । घरबहालका समस्या समाधान गर्न म डटेर लागें । यसमा अझै समस्याहरु छन् । बजारलाई सफा र सभ्य बनाउन मैले आफ्नो तवरबाट गरेकै हो । व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्थाबाट केही हदसम्म मैले काम गरेकै हो । व्यवसायीहरुलाई बोकाइने भारी करबाट मुक्त गर्न पनि मैले आफ्नो भूमिका निभाएकै हो । जहाँसम्म केही गर्न नसकेको भन्ने आरोप मिथ्या हो ।
३) जित्नु भयो भने केके गर्नुहुन्छ ?
मेरो पहिलो प्राथमिकता त व्यवसाय र व्यवसायीको संरक्षण गर्ने नै हुन्छ । चितवन कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा उद्योगको प्रमुख सम्भावना बोकेको जिल्ला हो । यसको विकासमा म लाग्नेछु । लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका निती तथा कार्यक्रमहरु बनाउनेछु । सप्तगण्डकी जलविद्युतको योजना अगाडि बढाउनेछु ।
अर्को तर्फ बीसहजारी ताल, पटिहानी, सिराईचुली, मेघौली, माडीमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार–प्रसार तथा नारायणी नदी किनारमा जलपर्यटनको सम्भावना खोज्नेछु । फुटपथको समस्या हल गर्नेछु । न्यून बिजकीकरणको समस्या हल गर्नेछु । कर तथा राजश्वको नीतिबारे गोष्ठीहरु चलाउँछु । सचेतना कार्यक्रमहरु गर्छु । धेरै गर्छु, भनेर साध्य लाग्दैन । नेतृत्वमा व्यवसायीहरुले सहन प्रधानले धेरै काम गर्छ भनेर पु¥याउन आतुर छन् । सबैको हार्दिकता छ, स्वागत छ ।
४) यसअघि तपाइँले हार्नुभएकै हो, अहिले आफ्नै साथी पहिला एउटै प्यानलमा रहनुभएका वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु श्रेष्ठसँग चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, किन ?
–मेरा रहरले भन्दा पनि बाध्यताले चुनाव लड्न आएको हुँ । व्यवसायीहरुले तपाइँ नै उठ्नुपर्छ भनेपछि म उठेको हो । एकपटक हारेको मान्छे उठ्न पाइँदैन भनेर कहीँ लेखिएको छैन । यसअघि हारेका मान्छेलाई व्यवसायीले उठाएनन् होला, तर मलाई त व्यवसायीहरुको मागका कारण म उठेको हुँ । राजुजी र मेरो यसअघि कुरा पनि भएको हो । उहाँले आफू फेरि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बस्ने र मलाई अध्यक्षमा समर्थन गर्ने भन्नुभएको थियो । महोत्सवपछि उहाँसँग भेट भयो, उहाँले त्यतिबेला मलाई दिनुभएको वचन बिर्सनुभयो । उहाँले पछि मसँगको भेटमा सहनजी म अध्यक्षमा उठ्ने गरी अगाडि बढेको छु भन्नुभयो । म त मिलेर जाऔँ भनेको थिएँ, उहाँ अगाडि बढेपछि म पनि व्याक हुन सकिनँ र आजको यो अवस्था आयो ।
५) चुनाव हो हार्न पनि सक्नुहुन्छ, हारेमा तपाइँको भूमिका के हुन्छ ?
–कुनै हालतमा मेरो हार हुँदैन । मलाई सबैको हार्दिकता पाएको छु । वस्तुगत संघका सबैबाट मैले सहयोग पाएको छु । यस अघि म प्राविधिक कारणले हार्नुपरेको हो । यो सबैलाई थाहा छ । मेरो जित सुनिश्चित छ । हार्ने त प्रश्न आउँदैन । घरदैलोमा जाँदा जुन र्हािर्दकता पाएको छु, त्यसले जित गर्नेछ । मलगायत मेरो टिमकै जित हुनेछ । मलाई जितबाट कसैले रोक्न सक्दैन । मलाई साथीहरुले अग्रीम बधाई दिइरहेका छन् ।
६) तपाइँको वस्तुगत संघतर्फ राम्रो सम्बन्ध छैन नि ?
होइन, गतल कुरा मेरो वस्तुगत संघतर्फ पनि राम्रो सम्बन्ध छ । दक्षता र क्षमताको आधारमा उम्मेदवारी दिएको हुनाले सबैको साथ र सहयोग मैले पाएको छु । होटल व्यवसायी, फेन्सी व्यवसायीहरुलगायत सबैले सहयोग गरेका छन् । म पनि होटल व्यवसायी संघको सदस्य नभए पनि होटल व्यवसायी म पनि हो । वस्तुगत संघको समर्थन छ । कर्पोरेटका साथीहरुको पनि समर्थन छ । सबैसँग राम्रो सम्बन्ध छ ।
७) तपाइँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा केही गर्न नसकेर नै अध्यक्षमा हार्नुभएको होइन र ?
होइन, यो गलत कुरा । म आफ्नै प्राविधिक कारणले हार्नुपरेको हो । त्यसमा पनि एकदम झिनो मतले मात्र । मेरा हारको केही समयपछि केही व्यवसायीहरु सहनलाई जिताउनुपर्ने थियो पनि भन्न आएका थिए । जहाँसम्म म नेतृत्वमा कहिल्यै आउन पाइनँ । व्यवसायीहरु मलाई नेतृत्वमा आएको हेर्न चाहेका छन् । त्यसैले त मलाई उनीहरुले नै अध्यक्षमा उठाएका हुन् । नारायणी नदीलाई सुन्दर बनाउन मैले पहल गरेको हुँ । विभिन्न करबाट व्यवसायीहरुलाई मैले नै मुक्त पारेको हुँ । केही हदमात्रामा घरबहालको समस्या समाधानमा मैले पनि भूमिका निभाएँ । बजारलाई सफा राख्न मैले संघमा बसेर छलफल चलाएँ । चितवन महोत्सवलाई परिमार्जन गर्न मैले ठूलै भूमिका खेलको हो । अनि कसले भन्यो सहनले केही गर्न सकेन भनेर ? नेतृत्वमा नबसेको मान्छेलाई कामको पहल गर्ने हो, त्यो पहल त मैले सधैँभर गरेको थिएँ ।
विसं २०२६ साल साउन १० गते पाल्पामा जन्मिएका पुष्प पाण्डे अहिले नवलपुर उद्योग...
पाल्पा जिल्लाको बाकामला गाविस वडा नं. ८ मा २०२४ साल चैत २५ गते जन्मिएका डासुराम...